“Indro Izy avy amin’ny rahona; ary ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Eny, Amena. Izaho no Alfa sy Omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia ny Tsitoha” Apôk. 1:7-8
Ny fomban’Andriamanitra dia ny manao ny andro iray isehoan’ny zavatra bitika ho fiandohan’ny fandresen’ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Araka izany, tsy ilaina ny fankalazana amin’ny fiantombohana miroborobo ho an’ny zavatra iray, na ny fianjerana amin’ny fahalemena miseho imaso. Harena, fahafenoana ary hery ho an’ny olony Andriamanitra. Ny fikasany ho an’ny vahoaka nofidiny dia toy ny tendrombohitra maharitra mandrakizay, mafy ary tsy voahozongozona.
Tsarovy fa tsy ny herin’ny olombelona no nanorina ny fiangonan’Andriamanitra, koa tahaka izany koa no tsy ahafahany manimba izany. Nandritra ny taona maro no naha-loharanom-piainana miboiboika ny Fanahy Masina. Misy fandresena ho an’ireo izay miezaka hanara-dalàna, amim-pirindrana amin’ny lalàn’Andriamanitra. Handresy ny fanoherana rehetra izy ireo. Homena ny fiambenan’ireo anjely masina izy ireo satria manao ny asan’Andriamanitra eo imason’ny fahavalo rehetra.
Nanolotra ny ainy i Kristy mba hanampiana izay rehetra miditra ao amin’ny tafiny, hiara-miasa Aminy amin’ny ady atao amin’ireo fahavalo hita sy tsy hita maso. Nanome toky Izy fa hiara-mandova Aminy ny lova tsy mety simba izy ireo, ka hanapaka toy ny mpanjaka sy mpisorona eo anatrehan’Andriamanitra. Ireo izay manaiky ny hizara eto amin’ity fiainana ity ny fanetren-tenan’Ilay Mpamonjy no hiara-mizara Aminy ny voninahiny koa. Ireo izay nifidy ny hiaritra ny fijaliana miaraka amin’ny vahoakan’Andriamanitra, fa tsy mitia ny fahafinaretan’ny fahotana mandalo, no homena toerana miaraka amin’i Kristy eo amin’ny seza fiandrianany.
Tano mafy ny tenin’ny fiainana. Handany ny heriny amin’ny firehetan’ny fahatezerany ny tafio-drivotry ny fanoherana, tsy ho re intsony ny hiakiaka. Ataovy amin-kerim-po sy amim-pifaliana ny asan’ny Tompo. Ny Ray ao ambony izay mitsinjo ireo nofidiny amin’ny fiahiana feno halemem-panahy indrindra, no hitahy ny ezaka atao amin’ny anarany. Tsy hitsahatra mihitsy ny asany raha tsy mihiaka ireo mpandresy, noho ny fahatanterahany hoe: “Fahasoavana, fahasoavana anie ho aminy” - ST, 14 Febroary 1900.